H.C.I: "ကံကိုပြင်လိုက်ပါ ” (ရဝေနွယ်- အင်းမ)
JP Present Info
"ကံကိုပြင်လိုက်ပါ ” (ရဝေနွယ်- အင်းမ)
ယခုတလော ကံမကောင်းဘူး၊ ဘာလုပ်လုပ် အခက်အခဲတွေနဲ့ ဘယ်တော့မှ အဆင်ပြေချောမွေ့တာ မရှိဘူး စတဲ့အသံတွေ ကြားနေရသလို ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း မကြာခဏ လုပ်လိုက်တိုင်း အခက်အခဲချည်းပဲ ကြုံနေရတော့ တခါတလေ ဟုတ်မှဟုတ်ရလား ကိုယ်တယောက်တည်း ဖြစ်နေတာလားလို့ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်မိရတယ်...။
တကယ်တော့ မတောင့်မတ မကြောင့်မကြ အားလုံးချည်းပဲ လိုတရ အဆင်ပြေနေရင်လည်း လောကကြီးဟာ ဘယ်ပျော်စရာ ကောင်းလေမလဲနော်..။ အခက်အခဲတွေ ကြုံလာလေ ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ရလာလေ ကိုယ့်ရဲ့ Levelဟာတက်လာလေ စမြဲလေ။ Game ကစားသလိုပေါ့ ခက်တာကို ကြုံလာမှ ကိုယ်ဘယ်လို ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ် ဆိုတာတွေကို ပြန်မြင်ကြည့်ပြီး ကြည်နှူးနိုင်တာပေါ့..။ အခက်အခဲ မကြုံဘူးတဲ့သူတွေ မဖြေရှင်းဘူးပဲ ရေသာခို လှေကြုံလိုက် သူများအားကိုးသူတွေ နောက်ဆုံးတကယ်အခက်အခဲ ကြုံလာရင် မဖြေရှင်းနိုင်တာတွေ တွေ့ဘူးကြမှာပါ..။
လူ့ဘဝရဲ့ အတွေ့အကြုံဆိုတာလည်း အခက်အခဲ အကြပ်အတည်းကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှ သမ္ဘာဆိုတဲ့ အတွေ့အကြုံ ရရှိနိုင်မှာပေါ့..။
တွေးမိတာလေးပါ...။ ကဲဒီတော့ နင်လားရဲ့ လောကဓံ ငါလားဟဲ့ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းကြည့်ကြရအောင်..။ တခါတလေ ကိုယ်ထင်သလောက် မခက်ခဲတာ တွေ့နိုင်သလို အောင်မြင်သွားရင်လည်း ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် ပီတီဖြစ်စရာ၊ ရီစရာ ဖြစ်နေတာ ကြုံဘူးကြမှာပါ..။ ဒီနေရာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့ ကံ၊ ဥာဏ်၊ ဝီရိယ အပြင် ပယောဂဆိုတဲ့ ဘေးက ပံ့ပိုးမှုတွေ ရရှိအောင် အောက်မှာ ဆရာတော် အရှင်ရာဇိန္ဒ
(ရဝေနွယ်- အင်းမ)ရဲ့ "ကံကိုပြင်လိုက်ပါ ”ဆိုတဲ့ ဘာသာရေး ဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ပြီး အခက်အခဲယူသမျှ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်း ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါကြပါစေ။
စာတွေ စမ်းရေးကြည့်နေရာကနေ ကလောင်နာမည် ပေးဖို့ နှင်းချယ်ရီ ဆိုလည်း မဖြစ်သေးတော့ လောလောဆယ် H.C.Iလို့ပဲ မှတ်လိုက်ကြနော်..
စာဖတ်သူ အသင်။ သင့်ကံ ဆိုးနေသလား။?
ဒါမှမဟုတ် သိပ်ကံကောင်း နေတယ်လို့ ထင်လား။?
ဒါမှမဟုတ် ကံကောင်းတယ်လဲ မဟုတ် ၊
ကံဆိုး တယ်လဲ မဟုတ်ပါဘူးလို့ သတ်မှတ်ထားသလား။?
ကုသိုလ် ၅မျိုးကို ဆောင်ရွက်ရင်း … တစ်ဘ၀တာ
(၁။) “၀သဘ ၏ သာမန်ဘ၀”
သီဟိုဠ်ရာဇ၀င်မှာ “၀သဘမင်း” ဆိုတာ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။
မင်းမဖြစ်ခင် သာမန်လူတစ်ယောက် ဘ၀တုန်းက
ဦးရီးတော် စစ်သူကြီးဆီမှာ နေရပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့မှာ ဟူးရား ပညာရှိတွေက
၀သဘ အမည်ရှိတဲ့ သူဟာ မင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့
ဟောပြောလာ ကြပါတယ်။ ဒီစကားကြားတော့
လက်ရှိ မင်းလုပ်နေတဲ့ “ယသဠာလက မင်း”က
သီဟိုဠ်ကျွန်းမှာ ၀သဘ အမည်ရတဲ့ သူအားလုံးကို
သတ်စေလို့ မိန့် ပါတော့တယ်။
(၂။) အသက်ဘေးက လွတ်ပြီ။
ဒီတော့ စစ်သူကြီးက သူ့ဆီမှာ နေနေတဲ့ “၀သဘ” ကို
မင်းဆီ အပ်ဖို့ မိန်းမ လုပ်သူကို ပြောပါတယ်။
သူရာထူး တိုးချင်တာလည်း ပါမှာပေါ့။
နံနက်စောစော ရောက်တော့ စစ်သူကြီးက
၀သဘကို အသာခေါ်ပြီး နန်းတော်ကို ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
၀သဘကို သတ်ဖို့ ခေါ်သွားတာ ဆိုတာကို သိတဲ့
စစ်သူကြီး ကတော်က ကွမ်းအလွန်ကြိုက်တဲ့
စစ်သူကြီးအတွက် “ထုံးမပါတဲ့ ကွမ်း”ကို
စစ်သူကြီး နန်းတော်တံခါးဝ ရောက်လို့
ကွမ်းစားမယ် လုပ်တော့ ထုံးပါမလာတာ တွေ့ပြီး
၀သဘကို အိမ်ပြန် ထုံးယူစေပါတယ်။
၀သဘ က အိမ်ရောက်တော့ စစ်သူကြီးကတော်က
သူ့အကြံအစည် အတိုင်း ဖြစ်လာလို့ ၀မ်းသာအားရနဲ့
“၀သဘ၊ သင့်ဦးကြီးက သင့်ကို မင်းကြီးဆီ အပ်ပြီး သတ်မှာ ..
ရော့ အသပြာ တစ်ထောင်ယူပြီး လွတ်ရာကို ပြေးပေတော့ ”
ဆိုပြီး ထွက်ပြေး ခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်။
၀သဘလည်း မင်းနဲ့ဝေးတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း
ရဟန်းတော်တွေကလည်း သူ့ကို ကြည့်ရှု ထားပါတယ်။
ဒီလိုနေရင်းနဲ့ တစ်နေ့မှာ ပညာရှိလူနူတစ်ယောက်က
၀သဘရဲ့ ဇာတာကို ကြည့်ပြီး “သင်.. မင်းဖြစ်လိမ့်မယ် ” လို့
ဟောလိုက်ပါတယ်။ ဒီစကားကြားတော့ “၀သဘ”ဟာ
အတော်အတန် စုမိတော့ “မုန့်သည်မသားသည်
မုန့်အနားကစ၍ စားရသည်” ဆိုတဲ့ ရှေးထုံးကို နှလုံးမူပြီး
မြို့စွန်ရွာစွန် ကစပြီး သိမ်းပါတယ်။ လိုရင်း ပြောရရင်တော့
နောက်ဆုံးမှာ “၀သဘ” မင်းဖြစ်သွားတယ်ပဲ ဆိုပါတော့။
(၄)။ နန်းစံသက်ကို တွက်ချက်ခိုင်းတော့
ဆိတ်ကွယ်ရာခေါ်ပြီး သူ ဘယ်နှနှစ်လောက်
နန်းစံရမလဲ ဆိုပြီး တွက်ခိုင်း ပါတော့တယ်။
ဟူးရား ပညာရှိတွေက တွက်ချက်ပြီး
“ ၁၂ နှစ် နန်းစံရမယ် ” လို့ ဟောလိုက်ပါတယ်။
၀သဘမင်းက ဟူးရားပညာရှိတွေကို အသပြာ
၁ထောင်စီပေးပြီး သည်အကြောင်း ဘယ်သူ့မှ
(၅)။ ကုသိုလ်တွေ ပြုပြီ။
အဲဒီနောက် ၀သဘမင်း ဟာ ရဟန်းသံဃာတော်တွေဆီ
ဆည်းကပ်ပြီး “အရှင်ဘုရားတို့၊ မင်းသက်
မရှိဘူးလား ဘုရား …” လို့ လျှောက်ထားပါတယ်။
ဒီတော့ သံဃာတော်တွေက -
၂။ နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ ရဟန်းတွေကို ဆေးလှူပါ။
၃။ ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့နေတဲ့ ကျောင်းဟောင်း၊
၄။ ငါးပါးသီလကို နေ့စဉ်စောင့်ထိန်းပါ။
၅။ ၈ရက်ဥပုသ်၊ ၁၅ရက်ဥပုသ်နေ့တိုင်း ၈ပါးသီလ၊ ၉ပါးသီလကို စောင့်ထိမ်းပါ။
မင်းသက်ရှည်လိမ့်မယ် ” လို့ မိန့်လိုက်ပါတယ်။
စာထဲမှာတော့ ၀သဘ မင်းပြုတဲ့ ကုသိုလ်တွေ
ကောင်းမှုတွေ အများကြီးပဲ ပြထားတယ် ။
( စာရှည် နေမှာစိုးလို့ ရေးမပြတော့ဘူး။ )
♦ လိုရင်းပြော ရရင်တော့ ၀သဘမင်းဟာ
( ၁၂ နှစ်သာ နန်းစံရမဲ့အစား ) ၄၄-နှစ် နန်းစံခဲ့ရပါတယ်။
(၆)။ “အတိတ်ကံ နဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ကံ”
ဒီ ၀တ္ထုမှာ အဓိက ပြောချင်တာကတော့
“၀သဘမင်း”ဟာ အတိတ်ကံအရ ၁၂နှစ်သာ နန်းစံရမှာပါ။
♦ ဒါပေမယ့် “အတိတ်ကံ” ကို “ပစ္စုပ္ပန်ကံ”နဲ့ ပြုပြင်
ယူလိုက်တော့ ၄၄-နှစ်တောင် နန်းစံခဲ့ရပါတယ်။
အပိုကြေး အနေနဲ့ “၃၂နှစ်” နန်းစံသက် ပိုရခဲ့ပါတယ်။
၀သဘ မင်းပြုခဲ့တဲ့ ကုသိုလ် ခြောက်မျိုးက
သူ့အနေနဲ့ ကတော့ “နန်းသက်ရှည်ကြောင်း” သီးခြား
အောက်ပါ လင်္ကာလေးနဲ့ တွဲမှတ်ထားလိုက်ပါဦး။
“ရေစစ်၊ ဆေး၊ ကျောင်း၊ ဘုရားဟောင်းပြုပြင်
ပဉ္စင်၊ အဋ္ဌ သီလ ဖြူစင် ၊သက်ရှည်ကြောင်းစု
ကောင်းမှု ၆-အင် အခွင့်စိုက် ပြုလိုက် ထာဝစဉ်။ ”
“၀သဘ မင်း”ကတော့ သူနဲ့ အသုံးတည့်မယ်
အသက်ရှည်ကြောင်း ကုသိုလ်တွေကို ရွေးပြုပြီး
(၇)။ “သင်နှင့် ကောင်းကံ ၊ဆိုးကံ”
အခု စာဖတ်သူတွေ ကတော့ တခြားသော ဘ၀
လိုအပ်ချက်တွေ တခြားသော အဆင်မပြေမှုတွေ
လူမှုရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကံဆိုးချင်ဆိုးနေမယ်။
စီးပွားရေး နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကံဆိုးချင်ဆိုးနေမယ်။
ကျန်းမာရေး နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကံဆိုးချင်ဆိုးနေမယ်။
ပညာရေး နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကံဆိုးချင်ဆိုးနေမယ်။
ရာထူးဌာနန္တရ နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကံဆိုးချင်ဆိုးနေမယ်။
နိုင်ငံခြားခရီး နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကံဆိုးချင်ဆိုးနေမယ်။
နောက်ဆုံး သေချင်လောက်အောင် အထိ ကံဆိုး နေစမ်းပါစေ။
၀သဘ မင်းဝတ္ထုကို အာရုံပြုပြီး ဆိုးနေတဲ့ကံကို
စိတ်ကြိုက် ပြုပြင်ယူလို့ရတယ် ဆိုတဲ့ အသိလေးကိုပဲ
(၈)။ “ဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ …အဲဒီတော့ ဘယ်လိုပြုပြင်ယူမလဲ..?”
အဲဒီ သေချင်လောက်အောင်ထိ ဆိုးနေတဲ့ကံကို
သေချင်လောက်အောင် ဆိုးနေတဲ့ကံကို ကုသိုလ် ၅မျိုးနဲ့
ဆိုးနေတဲ့ကံ “နင်နေ ငါသွား” ဖြစ်သွား ပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီကုသိုလ် ၅မျိုးကတော့ -
♦ ၁။ ဒါန
♦ ၂။ သီလ
♦ ၃။ ဂုဏ်တော်
♦ ၄။ မေတ္တာ
♦ ၅။ ၀ိပဿနာ တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီကုသိုလ် ၅မျိုးကို နေ့စဉ် ဖြစ်စေရမယ်လို့ အဓိဋ္ဌာန်ပြီး
နေ့စဉ် ပြုလုပ် သွားဖို့ပါပဲ။
(၉)။ “ငါးမျိုးကုသိုလ် ဘယ်လိုပြုရမယ်။”
ပထမဆုံးကုသိုလ်က “ဒါန” ပါ။
ကျောင်းကြီးတွေ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းနိုင်မှ “ဒါန” မဟုတ်ပါဘူး။
အိမ်မှာရှိတဲ့ ဘုရားကို ရေချမ်း ကပ်လိုက်မယ် ဆိုလည်း
ဒါန ဖြစ်သွားတာပါပဲ။ နောက် ကိုယ်ထမင်းချက်မယ့်
ဆန်ထဲက “လက်တစ်ဆုတ်စာလောက်”နှိုက်ပြီး အိမ်ရှေ့က
စာကလေးတွေ ခိုကလေးတွေကို ပစ်ကျွေးလိုက်မယ်
ထမင်းဝိုင်းကို သိပ်ပြီးလည်း မထိခိုက်စေပါဘူး။
နေ့စဉ် လက်တစ်ဆုတ် စာလောက် စာကလေးတွေကို
ကျွေးနေမယ် ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ဝန် ကိုယ့်အားနဲ့
မျှတဲ့ ဒါန ဖြစ်နေတာပါ။
ဒုတိယက “သီလ” ပါ။ သီလမှာလည်း လောကီ
ထဲမှာနေတဲ့ လူတစ်ယောက် အတွက် “ငါးပါးသီလ”လောက်
လုံခြုံအောင် စောင့်ထိန်း လိုက်နိုင်တယ် ဆိုရင်ပဲ
၈ပါးသီလ၊ ၉ပါးသီလကို စောင့်ထိန်းနိုင်ရင်တော့
အကောင်းဆုံးပေါ့။ သီလကို စောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်
သီလကလည်း ကိုယ့်ကို သူ့သတ္တိ အားလျော်စွာ
တတိယက “ဂုဏ်တော်”ပါ။ ဂုဏ်တော် ၉-ပါးထဲက
ကိုယ်နှစ်သက်ရာ တစ်ခုခုကို ပွားလို့ရပါတယ်။
အရဟံဂုဏ်တော်ကိုပဲ . . .
အရဟံ = ပူဇော်အထူးကို ခံယူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား၊
အရဟံ = ကိလေသာ ကင်းစင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား၊
အရဟံ = ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ပင် မကောင်းမှုကို
ပြုတော်မမူသော မြတ်စွာဘုရား၊လို့ ပွားများရပါတယ်။
အရဟံ ဆိုတဲ့ ပါဠိလေးရယ်။
အရဟံရဲ့ နောက်က အနက်သုံးမျိုးရယ်က
ပွားလို့ ဆင်ခြင်လို့ သိပ်ကောင်းတဲ့ ပါဠိနဲ့အနက်လေးတွေပါ။
စာရေးသူရဲ့ “မေတ္တာ အတွေးများ စာအုပ်”မှာလည်း
ပွားပုံ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေးပြထားပါတယ်။
မေတ္တာပွားတဲ့ နေရာမှာ အဓိက အကြံပေးချင်တာတော့
ပထမ ကိုယ့်အပေါ် ကျေးဇူးရှိတဲ့ ကျေးဇူးများတဲ့
လူပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကို တစ်ယောက်ချင်း ကုန်အောင်ပွားပါ။
ပြီးရင် နတ်ကောင်း နတ်မြတ်တွေ၊
လမ်းမြို့နယ်၊ မြို့၊ နိုင်ငံကို စောင့်ရှောက်နေကြသော
နတ်ကောင်း နတ်မြတ်တွေ အားလုံး
ကိုယ်ဆင်းရဲ စိတ်ဆင်းရဲ ကင်းပါစေ၊ အစစအရာရာ
အဆင်ပြေ ပါစေ . . . စသည်ဖြင့် ပေါ့လေ။
နောက်ဆုံးက “၀ိပဿနာ” ပါ။
၀ိပဿနာ ကတော့ ကိုယ်အားထုတ်ဖူးရာ၊
ကိုယ်သန်ရာ သန်ရာ၊ကိုယ့် အာစရိယ ၀ါဒအတိုင်း
(မည်သည့် တရားစခန်း မည်သည့်
အာစရိယ၀ါဒမျှ သင်ကြားထားခြင်း မရှိသူများအဖို့
အသက်ကို ပုံမှန်ရှူလျှက် “၀င်လေ” ၀င်လာလျှင် ၊
၀င် လာ သည်ဟု သိပေး၊ “ထွက်လေ” ထွက်သွားရင်
ထွက်သွားသည်ဟု သိပေးခြင်းဖြင့် မိမိစိတ်ကို
ပဏာမ လေ့ကျင့်ကြလျှက် ၇ရက်စခန်း၊
၁၀ရက်စခန်း စသည်တို့ကို ၀င်ရောက်နိုင်ရန်
တိုး၍ ကြိုးစား ကြသင့်ပေသည်။)
(၁၀။) “ကုသိုလ်-၅မျိုး တစ်နေ့တာ”
ကဲ … စာဖတ်သူ၊ စိတ်ကူးနဲ့ပဲ ကုသိုလ်၅မျိုးကို
မနက် အိပ်ရာက ထတာနဲ့ ကိုယ်လက် သန့်စင်ပြီး
မိသားစု ကိစ္စတွေကို ဘာမှ မလုပ်နဲ့ဦး။
♦ ဘုရားသောက်တော်ရေကိုအရင်ကပ်ပါ။ (ဒါန)
♦ ကပ်ပြီးရင် ၅ပါးသီလ ခံယူပါ။ (သီလ)
♦ အဲဒါပြီးရင် ဂုဏ်တော်ကို ၅-မိနစ် ( ဂုဏ်တော် )
♦ မေတ္တာကို ၅-မိနစ် ပွားပါ။ ( မေတ္တာ )
♦ ပြီးရင် ၀ိပဿနာ ၅-မိနစ် ပွားများပါ။ ( ၀ိပဿနာ )
အင်မတန် နည်းပါးတဲ့ ၁၅မိနစ်အချိန်လောက်တော့
လူတိုင်း လုပ်နိုင်လောက်မယ် ထင်ပါတယ်။
( ၅မိနစ်စီ ဆိုသည်မှာ အနည်းဆုံး
မိမိတို့၏ ခွန်အားအလိုက် ၊
သဒ္ဓါ တရားအလိုက် ၁၀မိနစ်စီ၊
နာရီဝက်စီ၊ တစ်နာရီစီ စသည်ဖြင့် အဓိဋ္ဌာန်ပြု၊
နေ့တစ်နေ့တာရဲ့ အစကို ကုသိုလ် ၅မျိုးနဲ့ စလိုက်တာ
ဘယ်လောက် ကျက်သရေ ရှိသွားလဲ ။
အိပ်ရာထပြီး နာရီဝက် ၁နာရီအတွင်းမှာပဲ
ကုသိုလ်၅မျိုး ရနေပါပြီ။ အဲဒီ ကုသိုလ်
၅မျိုးပြုပြီးမှ မိသားစုကိစ္စ၊ ကိုယ့်ကိစ္စ ၊
အဲဒီလိုနဲ့ မနက်စာစားပြီးတဲ့ အခါ ဆန်လက်
တစ်ဆုတ်စာယူပြီး ခြံရှေ့မှာ ငှက်ကလေးတွေ အတွက်
“ဒီနေ့ မနက် ပြုဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်၅မျိုး ကိုလည်း
အမျှ ပေးဝေပါတယ်။အမျှ အမျှ အမျှ ယူတော်မူကြပါ။
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု ”ဆိုပြီး နတ်ကောင်း၊
နတ်မြတ်များနဲ့တကွ ဝေနေယျ အပေါင်းကို
သဒ္ဓါတရားလဲ ထက်သန်လာတယ် ဆိုရင်
ညပိုင်း ကိုးရီးယားကားလေး မလာခင်၊
ဒါမှမဟုတ် ကိုးရီးယားကားလေး ပြီးသွားတဲ့အခါ
ကုသိုလ်ငါးမျိုးကို မနက်ကအတိုင်း တစ်ကြိမ်
ဆိုးနေတဲ့ကံဟာ တောင်းပန်ပြီး ထွက်သွားဦးမှာပါ။
ဒါပေမယ့် ဒီနေ့လုပ်-နက်ဖြန်ဖြစ် ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့
ဘယ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲ။ တစ်လတန်သည် ၊
ရက်မပျက်အောင် အဓိဋ္ဌာန်ပြု၍ လုပ်ရပါမယ်။
“အကုသိုလ်”ဆိုတဲ့ အင်အားက ကြီးလွန်းနေရင်တော့
ချက်ခြင်းကြီး ရနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ကုသိုလ် အင်အား ကောင်းလာတာ
နဲ့အမျှ ကုသိုလ်အင်အားကို ကြည့်ပြီး လန့်ပြေးသွားမှာပါ။
ဒါက ကံဆိုး နေတဲ့သူတွေကို ပြောတာပါ။
ကံကောင်း နေတဲ့သူတွေ အတွက်လည်း အမြဲတမ်း
ကံကောင်းနေအောင် ကုသိုလ်၅မျိုး နဲ့ အမြဲပြုစု
ဒီကုသိုလ်၅မျိုးနဲ့ ကံကောင်းအောင် လုပ်နေတဲ့အတွက်
ဒုတိယဘ၀၊ တတိယဘ၀ စသည်တွေမှာလည်း
(၁၂)။ “ဒုက္ခကြုံရင် သစ္စာဆို”။
♦ ဒီကုသိုလ် ၅မျိုးကို “ကံကောင်းခြင်း၊ ကံဆိုးခြင်း” ကြောင့်
မဟုတ်ဘဲနေ့စဉ်ဝတ်တစ်ခု အနေနဲ့ ပြုရပါမယ်။
အဲဒီလို ပြုနေစဉ် အတွင်းမှာပဲဘ၀ “အခက်အခဲ”
တစ်ခု ကြုံလာမယ်။ဒါဆို ကိုယ်ပြုတဲ့ကုသိုလ်၅မျိုးကို
နေ့စဉ် အမျှပေးဝေနေတဲ့ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကို
တိုင်တည်ပြီး သစ္စာဆိုလို့လည်း ရပါတယ်။
“ကျွန်ုပ်သည် ကုသိုလ်၅မျိုးကို နေ့စဉ်ပြုပြီး၊
ဤသစ္စာစကား မှန်ကန်ပါက ယခုတွေ့ကြုံနေရသော
နတ်ကောင်း နတ်မြတ်တို့က ကူညီမစတော်မူပါ ။”
(၁၃)။ “သံသရာကပင် ကျွတ်နိုင်ရဲ့”
ကုသိုလ် ၅-မျိုးထဲမှာ “၀ိပဿနာ”လည်း ပါနေတော့
တရားမှတ်ရင် ပါရမီပါခဲ့ရင် တစ်မဂ် ၊တစ်ဖိုလ်မှသည်
လေးမဂ်၊ လေးဖိုလ် အထိ တရားထူးတရားမြတ်တွေ
ရသွားပြီး သံသရာဝဋ်က ကျွတ်သွားနိုင်ပါသေးတယ်။
ကုသိုလ် ၅မျိုးကို ဘယ်အဆင့်အထိ ပြုရမလဲ… ဆိုရင်
ညအိပ်ရာဝင်လို့မှ ဒီနေ့ တစ်နေ့တာအတွက် ကုသိုလ် ၅မျိုး
မပြုရသေးရင် အိပ်လို့ လုံးဝမပျော်တဲ့ အဆင့် ၊
ချက်ခြင်း ထလုပ်လိုက်မှ အိပ်ပျော်တယ် ၊
အိပ်လို့ရတယ် ဆိုတဲ့ အဆင့်ထိ ပြုလုပ်ကြရပါတယ်။
ကဲ . . . စာဖတ်သူ … ၊
ကံ နဲ့ ပတ်သက်လို့ သေချင်လောက်အောင်
ဆိုးနေပါစေ။ “ကုသိုလ် ၅မျိုး” နဲ့သာ နေ့စဉ် ပြုပြင် လိုက်စမ်းပါ။
-【ရေးသားသူ - ဆရာတော် အရှင်ရာဇိန္ဒ
ကျမ်းကိုး။ ။မဟာဝင်ဝတ္ထု - ကျီးသဲလေးထပ်ဆရာတော်။
Aunty Tint 1 April 2014 at 19:26
သိသင့်သိထိုက်တာလေးတွေ မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ နှင်းချယ်ရီ ...
Unknown2April 2014 at 07:15
တီတင့် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။ လာရောက်ဖတ်ရှုအားပေးတဲ့ အတွက်
You would like to open Japanese Textile Shop and 100Yen shop in Myanmar and any other countries.
feel free to contact our company.
Tel:03-6903-6419, Fax:03-6903-6319 Mobile:080-3562-1812,
Hero Zone Co: Ltd;
Chirimen (ဂျပန်ဝေဖာ ပိတ်စ အဆင်များ))
(Komon Kubo 小紋工房)ကုမ္ပဏီထုတ် ဂျပန်ပိတ်စမျိုးစုံ..
Japanese Chirimen (Komon Kubo 小紋工房)ကုမ္ပဏီထုတ် ဂျပန်ဇာများ